कांग्रेसको समानुपातिक सूची यस्तो छ | Lumbini Aawaz
कांग्रेसको समानुपातिक सूची यस्तो छ
काठमाडौं, कात्तिक १५ – नेपाली कांग्रेसले आफ्ना एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यलाई प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । पार्टीकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका नेतालाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । यस्तै कांग्रेसले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई पनि समानुपातिकको सूचीमा राखेको छ ।
कांग्रेसले यसअघि पनि समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका केही नेतालाई पुनः दोहोर्याएको छ । केही नयाँ अनुहारले पनि अवसर पाएका छन् । पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, नेता बालकृष्ण खाँण, नेत्री सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पार्वती डिसी चौधरी, किशोरसिंह राठोर, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर विक, मीन विक, बहादु सिंह लामा, खिमप्रसाद भुसाल समानुपातिक सूचीमा छन् ।
मिलन श्रेष्ठ राजेन्द्र गुरुङ मनीष जोशी
आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।
जुम्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा समानुपातिक तिर माओवादीको अग्रता खेर गएका मत; यस्तो छ समानुपातिक को प्रावधान १६५ मध्ये २२ स्थान जित्ने कांग्रेसले कहाँ कहाँ जित्यो; सूची निर्वाचन प्रक्रिया सुरु, समानुपातिक बन्द सूची आज काँग्रेसको सुरुवाती अग्रता! कहाँ को अगाडी? काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिक सूची सच्यायो जमिनमा कार खेती हुने दुनियाको यस्तो अचम्म ठाउं समानुपातिकमा कांग्रेसको अग्रता